In la abuuro badeecado aad u fiican sida waajibkayaga.
Midabka: Casaan ama Caado
Cabbirka: 18*5.25*18inch ama Custom
Shayga: bacda kululaynta pizza
Magaca: bacda kulul ee pizza/bacda qaboojiyaha pizza
Si joogto ah u jebiya qaab-dhismeedka warshadaha oo ku saleysan jihada suuqa iyo waayo-aragnimada adeegsadaha, kaliya ma haysanno shaqaale safka hore ah oo xamaasad leh iyo kooxda R&D ee ugu xoogga badan, laakiin sidoo kale naqshadeeyayaasha casriga ah ee aan caadiga ahayn, alaab-qeybiyeyaal tayo sare leh iyo casriyeyn aqoon isweydaarsi wax soo saar.
Annagu ma nihin soo -saaraha fudud ee bacda dahaarka, waxaan nahay saldhigga wax -soo -saarka ee sumadda bacda dahaarka, qodobka ugu muhiimsan ee lagu sameeyo hawlgalka sumadda si guul leh waa in la doorto lammaane iskaashi oo wanaagsan shaki la'aan.
Fikradda adeegga bakaylaha --- had iyo jeer siiso adeeg qiimo leh macaamiisha
1) Ururi oo falanqee macluumaadka khibrada macmiilka
Adigoo la xiriiraya isticmaaleha shaqaalaha iibka iyo adeegga, si aad u hesho macluumaad khibrad macmiil oo waxtar u leh hagaajinta badeecadaha.
2) Ururi oo falanqee baahida macaamiisha
La xiriir macaamiisheena si ay u bixiyaan xalka boorsada gudbinta oo aad u fiican.
3) Waxsoosaarka la habeeyay
Wax -soo -saar heer sare ah, si loo siiyo macaamiisha alaab tayo sare leh iyo xalal.
4) Bixinta badeecadda oo dhammaystiran
Si aad u dhammaystirto wax-soo-saarka, gaarsiinta, rakibidda, macaamiisha ha ka walwalaan.
5) Ujeeddo adeegsade
Xooga saar isbeddellada warshadaha, ku adkayso suuqa u jihaysan si loo horumariyo loona baadho badeecadaha cusub.
6) Kobcinta saamaynta sifooyinka alaabta
Si joogto ah diirada u saar hagaajinta faahfaahinta badeecada, oo si joogto ah u hagaajisa astaamaha badeecadaha iyo faa'iidooyinka suuqa kala -qaybinta, oo ka baxsan filashada macmiilkayaga.
7) Kor u qaad tayada alaabta la diyaarshay
Iyadoo la falanqeynayo waayo -aragnimada isticmaaleyaasha dhiggooda si loo hagaajiyo waxqabadka alaabta iyo shaqada.
Bacda pizza waxay bixisaa haynta kulaylka gaarka ah ee aasaaskaagu u baahan yahay adeeggeeda gudbinta. Boorsadani waxay isticmaashaa 2 "dahaar-dhumuc weyn oo poly-batting ah si taas loo dhammaystiro, iyadoo la ilaalinayo pizzas-kaaga 10% ka diirran yahay tartanka inta lagu jiro saacadda ugu horreysa ee la isticmaalo qayb yar oo kharashka ah.
Boorsadan gaarsiinta Pizza -ka qaaliga ah waxaa loogu talagalay dhammaan casriyeynta ay dadka gaarsiinta pizza u baahan yihiin si ay macaamiishaada ugu helaan kulayl aad u kulul oo kaamil ah. Waxay ka dhigtaa gaadiidka pizzas hawl aan dadaal lahayn, waxayna ka caawin doontaa pizzas -kaaga inay yimaadaan albaabka ilaaliyahaaga oo kulul oo cusub, sida markay ka soo baxeen foornada ..
Suumanka la xoojiyay waxay kor u qaadaan qaadista badbaadada leh, raaxada leh waxayna ku sii jiri doontaa isticmaalka soo noqnoqda. Hoosta looxaanta adag iyo suunka gacanta ee bacda hoosteeda ayaa xaqiijinaya xasilloonida marka la qaadayo tiro kasta oo pizza ah.
Bannaanka nylon ee waarta waa biyo u adkaysta, ilaalinaya cuntooyinka iyo hubinta nadiifin aan dadaal lahayn. Xitaa waxaad ku tuuri kartaa boorsadan makiinada weelka dhaqaysa si aad u hesho xal nadiifin oo xitaa sahlan.
Si laguugu sahlo, daaqad aqoonsi hufan oo ku taal bannaanka bannaanka ayaa shaqaalahaaga siisa meel ammaan ah oo lagu kaydiyo cuntooyinka, tigidhada, rasiidhada, ama xitaa kaararka ganacsiga.
Waxaad la xiriiri kartaa iibintayada ka hor intaadan dooran boorsooyinka daboolida ee la filayo, waxaan bixinnaa alaab, midab iyo astaan ​​u ahaanshaha baahiyahaaga oo dhan sida ugu wanaagsan.
Qalabka bacda dahaarka ee caadiga ah ee suuqa ayaa inta badan ku jira maro aan la tolan + suuf luul ah oo filim aluminium ah, ka dibna maro Oxford ama polyester.
Habka guud ee bacda dahaarka: daabacaadda shaashadda, qaabka midabka.
Nooca aan la tollayn: duubista filimka, daabacaadda gudbinta kuleylka iyo daabacaadda dib-u-dhigga.
Maro Oxford ama nooca polyester -ka: daabacaadda gudbinta kuleylka
Boorsada dahaarku waa nooc ka mid ah bacda oo leh saamayn heerkulka oo joogto ah, oo hayn karta qabow/kulayl (diirimaad jiilaal iyo qabow xagaaga). Lakabka dahaarka ee badeecaddu waa suuf dahaar aad u qaro weyn leh, kaas oo bixiya waxqabadka dahaarka kulaylka oo wanaagsan. Boorsada waa la laaban karaa si sahlan loo qaado.
Dharka: Maro Oxford ama maro nayloon, xoog leh oo adkaysi u leh; Waxaa lagu soo ururiyey kelmad caag ah oo aan biyuhu lahayn, suufka lidka-hoosta.
Qaab-dhismeedka: bakhaar raashin dahaaran oo madaxbannaan oo lagu soo ururiyey nidaamka cadaadiska ka-hortagga, keydinta cuntada lama cadaadin.
Gudaha: gudaha bakhaarka cuntada waxaa laga sameeyey alwaax aluminium ah, si loo gaaro shaqada kuleylka iyo dahaarka qabow ee suufka PE. Waa badeecada badbaadada deegaanka iyo badbaadada, oo si toos ah u taaban karta cuntada.
Function: isticmaal tiknoolajiyada isku xidhka aan dhalaalka lahayn ee dhalaalaya, wakhtiga ilaalinta kulaylka oo dheer.
Naqshad la qaadan karo, iftiin leh oo moodada leh, waxay cuntada ku hayn kartaa waqti dheer, fududahay in la isticmaalo, ku habboon jimicsiga dibadda iyo nolol maalmeedka
Waa shaqada aasaasiga ah ee bacda dahaarka si cunnadu u ahaato mid kulul ama qabow, tani waa nooc ka mid ah boorso gaar ah oo leh saamayn dhawrid kuleyl oo muddo gaaban ah, lakabka dahaarka alaabtu waa suuf luul ah + bireed aluminium ah, ayaa bixin kara waxqabadka dahaarka kuleylka oo wanaagsan.
Iska caabin heer sare ah, oo aan fududayn in lagu jebiyo cadaadis culus ama saamayn, kama tagi doono wax xoqan ah.
Tani waa tixgelinta koowaad marka aad dooranayso bacda dahaarka. In kasta oo noocyada kala duwan ee badeecadaha siyaabo kala duwan loo shaabadeeyo, xidhitaanku waa shuruud lagama maarmaan u ah in cuntada cuntada cusub lagu hayo muddo dheer.
Heerka caalamiga ah ee cabbirka shaabadaynta ayaa ah in la qiimeeyo tijaabada huurka la hubo. Qoyaanka dabacsanaanta ee bacda dahaarka oo tayo sare leh ayaa 200 jeer ka hooseeya badeecadaha la midka ah ee suuqa yaalla, kuwaas oo cuntada sii hayn kara muddo dheer.
Kala duwanaansho iyo kala duwanaansho
Cabbirro kala duwan ayaa loogu talagalay bacaha barafka ee dib loo isticmaali karo ee baahiyaha maalinlaha ah si waafaqsan, bacaha barafku waxay hayn karaan qabow iyo kuleyl labadaba (heerkulka ugu hooseeya ee bacda barafka ayaa la qaboojin karaa -190 ℃, kan ugu sarreeya waxaa lagu kululayn karaa 200 ℃, cabbirka ayaa si aan kala sooc lahayn loo gooyo).
Heerka cuntada agabka ilaalinta deegaanka, aan sun ahayn oo aan dhadhan lahayn, anti-ultraviolet-ka, ma fududa in la beddelo midabka.